Dadweynaha Somalida Ogadeeniyow; Dambiiluhu Xaq ma u Leeyahay in uu Bulshadeena ku Dhex Noolaado? – Rasaasa News
Dadweynaha Somalida Ogadeeniyow; Dambiiluhu Xaq ma u Leeyahay in uu Bulshadeena ku Dhex Noolaado?
Mar 24, 2010 cabdala af awarnle, daa, Jwxo-shiil, maxamed anni, sulub, uus
“Kuwii ganay geesigii [Dr. Dolal] gafbay naga wada galeen, guushii halgankay gubeen, hadaynaan gabagabayn dawgoodana ayna garan garowshiyo xaajo galin, Xornimo loo guulo iyo xaalkeenii gabo gabow, cilmiyo garashuu lahaa gayigiisuu jeclaa dhakhsow uma gaboobayoo magaciisa guudka tagay, intaan kala guur imaan gamuun iyo hooto dhicin wax garo oo gibir i sii”.
Wararka ka imanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxay tibaaxayaan in goor dhaw ay soo gaadheen Nairobi, xubnihii ugu sareeyey xaga ciidanka kooxda Jwxo-shiil. Xubnahan oo si kala gooni gooni ah u soo gaadhay Nairobi ayaa waxaa ka mid ah ragii ka qayb qaatay dilkii Dr. M S Dolal.
Sidii aan maalin dhawayd idiin sheegnay, waxaa si habqana uga soo talaabay xadka Kenya xubno badan oo hore uga tirsanaa ururka ONLF, baryihii dambase ka leexday shuruucdii lagu ciidameeyey dambiyona u gaystay dadweynah Somalida Ogadeeniya. Xubnahan eegga Nairobi yimid waxaa ka mid ah; Dambiile Cabdi Cabdulahi oo ay Jwxo-shiil walaashii dhashay una qaabilsanaa xidhiidhka dhinaca ciidamada iyo Dambiile Maxamed Anni oo uu Jwxo-shiil Adeer u yahay ahaan saraakiisha kooxda Jwxo-shiil ugu saraysa ee ciidamada gudaha. Waxaa isna hore u soo galay Nairobi oo ku dhuumaalaysta Dambiile Cabdiraxmaan Daa,uus oo isagana uu Jwxo-shiil adeer u yahay ahna saraakiishii gudaha u joogay Jwxo-shiil.
Waxaa isagu muddo Hargeysa Jooga Sulub Cabdi Axmed, oo uu Jwxo-shiil adeer u yahay ahaana nin ay isku shaqo hayeen Cabdi Cabdulahi. Sulub Cabdi Axmed iyo Cabdi Cabdulahi ayaa iyagu ahaa labada gacmood ee Jwxo-shiil, dunuub badan ku galay magac Jwxo-shiil.
Waxaa iyaguna ahaa halbowlayaasha Jwxo-shiil, Maxamed amni, Cabdiraxman Daa,uus iyo Kharar Daaweyn oo isagu mar dhaxdii ahayd dhintay. Nimanka waxay kala wateen ciidan saddex madax ah oo ahaa kuwii dilay Dr. Dolal, waxaana magacyadoodu ay ka dhex muuqdaan warbixin dheer oo ay qortay Gudigi daba gal oo loo sameeyey in ay baadho cidii ka dambaysay dilkii Dr. M S Dolal.
Waxaa kale oo iyana ahaa hunguriga Jwxo-shiil, Cabdala Af Waranle iyo Mustafe Cali Cabdi, oo labadooduba ka hawlgala xawaalada Kaah ee Dubai, oo iyaga laftigooda uu Jwxo-shiil adeer u yahay. Sida aan warar hoose ku helayna waxaa ku socda baadhid ay wado safaarada Dubai ee Itobiya oo ku saabsan gacantii ay ku lahaayeen taakulaynta Jwxo-shiil, hadii ay arintaasi cadaatana waxaa uu burbur ku imandoonaa shirkada Kaah [liquidation].
Sida aad ka aragtaan magacyada dambiile Jwxo-shiil, ayaa wax uu wax u dirto nooca ay doonaanba ha noqdaane waxay wada ahaayeen beeshiisa, sidaas ayeyna ku sheegan jireen mudo dheer magaca ururka ONLF. Waxayna dunuub xoog leh ka galeen guud ahaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya gudo iyo dibadba.
Waxaase dhab in xaqu kolka afka la qabto uu feedhaha ka dilaaco, waana tan keentay in kashifaada Jwxo-shiil ay maanta meel walba ka muuqato. Waxaana kooxda Jwxo-shiil, maanta gudaha Ogadeeniya kaga maqan Sheekh Deeq oo aan war laga hayn in uu dhintay iyo in uu nool yahay, balse ay mar soo duushay in uu dhintay.
FG. Cabdala Af Waranle, Maxamed anni, Cabdiraxman Daa,uus, Sulub Cabdi Axmed iyo Cabdi Cabdulahi waa ragan oo kuligood Ilmo adeer ah, si toos ahna uga qayb qaatay dilkii Dr. M S Dolal, waxay ku kala nool yihiin Dubai, Hargeysa iyo Nairobi.
Jwxo-shiil, oo Dirqi Kaga Baxsaday Gacanqaad ka Yimid Xubno ONLF ah, oo ku Sugan South Afrika